Trinidad ka hatrany Saint Lucia: Avy amin'ny tanin'ny KFC ka hatrany amin'ny tany kanto
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Trinidad ka hatrany Saint Lucia: Avy amin'ny tanin'ny KFC ka hatrany amin'ny tany kanto
Sidina adiny iray monja avy any Trinidad mankany Saint Lucia, fa tontolo 2 samy hafa miharihary. Trinidad dia foibem-barotra sy solika. Castres, renivohitr'i Saint Lucía, dia vavahady miadana mankany amin'ny tany tendrombohitra, hotely ary fiainana akaikin'ny ranomasina.
Tonga any Saint Lucia, Dr. Peter Tarlow, izay mitarika ny SaferTourism fandaharana nataon'ny eTN Corporation izay anton'ny nahatongavany tany Saint Lucia, dia nahatsikaritra fa eto izy dia misento fatratra ary mahatsiaro milamina.
Port-of-Spain (POS), renivohitr'i Trinidad sy Tobago, no ivom-pandraharahana sy fitaterana any atsinanan'i Karaiba. POS koa no renivohitr'i Fried Chicken Kentucky an'izao tontolo izao. Ny olona any Trinidad dia mpanara-dia KFC be zotom-po ary milaza fa ny akoho nendasiny no tsara indrindra eto an-tany. Malaza be ny KFC ka nandroaka an'i McDonald's mihitsy aza.
Eto amin'ity faritra ity dia vanim-potoana orana. Ka amin'izao vanim-potoana izao, ny mpitsidika ny POS dia mila miomana amin'ny karazana siny isan-karazany - siny orana, siny fries french, siny vita amin'ny cole slaw, ary mazava ho azy ny siny feno akoho nendasina marobe miaraka amin'ny zava-manitra eo an-toerana.
Tonga any Saint Lucia, tsy isalasalana fa nosy tsara tarehy ity misy totohondry hafahafa, seranan-tsambo feno yachts, ary fahitana any an-tendrombohitra mahatalanjona. Tao anatin'ny sidina adiny iray monja dia niova izao tontolo izao avy tamin'ny akoho nendasina nankafiziny ho sakafo gourmet miaraka amin'ny habaky ny fomba fijery mahafinaritra.
Amin'ity faritra eto amin'izao tontolo izao ity dia ny fahalefahana no lakilen'ny fahombiazana. Aiza ny drafitr'i Dr. Tarlow hampianatra amin'ny fiandohan'ny herinandro, dia afaka misokatra izy amin'ny hevitra fa misosa daholo ny zavatra eto. Mety hiova vetivety ihany izany rehetra izany.
Masindahy Lucia - tsy natao ho an'ny saro-kenatra na maratra mafy na mpandahatra fotoana tokony hatao. Raha misy mahita banga tsy ampoizina ao anaty fandaharam-potoana noho ny fiovana tsy voaomana dia mankanesa any amin'ny fivarotana KFC. Saint Lucia dia manana azy ireo koa.
Amin'izao fotoana izao dia miasa miaraka amin'i Saint Lucia SaferTourism.com ary Dr. Peter Tarlow. Manana traikefa efa an-taonany mahery izy niasa tamin'ny trano fandraisam-bahiny, tanàna sy firenena miompana amin'ny fizahan-tany, ary na ny mpitandro ny filaminana ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina ary ny polisy eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny fizahantany. Dr. Tarlow dia manam-pahaizana malaza eran-tany amin'ny sehatry ny fiarovana sy ny fiarovana ny fizahantany.
Sidina avy any Moskoa mankany Sharm al Sheikh? Rahoviana ary amin'ny fomba ahoana no hamerenany indray?